“အတွေးစလေးတွေ”: “ ချင်းတွေ . . . ”
Posted by Han Kyi at 3:57:00 am
ကျောင်းတက်ပြီး ၄လလောက်ကြာမှ အဲ့လူကားနက်ကြီး
နဲ့လာတာမြင်တော့ အကိုကမေးတယ် မင်းအဖေက
ဝန်ကြီးကားမောင်းတာလားတဲ့။ အဲ့ခေတ်က 929 ဆိုလား၊
ဖိနပ်သဲကြိုးပြတ်လို့ တွယ်အပ်တွေရှာပြီး မယ်ငီးတို့၊
ကျမတို့မောင်နှမ ကျိုင်းတုံပြန်တော့ လေယာဉ်ကွင်း
နောက်မှသိတာက သူ့အဖေက နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်တဲ့။
ဆရာဟန်ရဲ့ အိမ်သူသက်ထား ချင်းမလေး မဒမ်က တီတင့်နဲ့လဲ သွေးနည်းနည်းစပ်ပုံရတယ် တီတင့်လဲ ကရင်သွေး ၅၀% ပါတယ်ဆရာဟန်ရဲ့ ... :)
ချင်းပြည်နယ်အကြောင်းလေး ဖတ်လိုက်ရတော့ ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက တက္ကသိုလ်များ ခြေလျင်တောင်တက်အသင်းနဲ့ ဗစ်တိုရိယတောင်ကို မင်းတပ်ကနေ တဆင့်တက်ခဲ့တာကို သတိရမိတယ် ဆရာဟန်ပြောသလိုပဲ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ သွားရတာ အတော်လေးခက်ခဲပင်ပန်းပါ့ ....
ချင်းမလေးကို နောက်ရင်းပြောင်ရင်း ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဆရာဟန်တို့ ဇနီးမောင်နှံကို သဘောကျတယ်...
ကျမလည်းချင်းပြည်တောင်ပုိုင်းကောမြောက်ပုိုင်းကောကွင်းဆင်းအလုပ်လုပ်ဖူးတယ်။ ရွာစဉ်စခန်းချပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူငယ်ချင်းအရင်းတစ်ယောက်ကလည်းချင်းဆုိုတော့ချင်းဓလေ့နဲ့ မဝေးလှဘူး။
၀ိတုိုရိယတောင်၊ ကနေဒီတောင်တွေလည်းကွင်းဆင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ တောင်ဇလပ်တွေဝေတဲ့အချိန်ဆုိုဝိတုိုရိယတောင်တက်ရတာမောတယ်တောင်မထင်မိဘူး။ မွှေးပြီးအေးနေတဲ့လေကလည်းအရသာ။ မြက်ရုိုင်းတောထဲထုိုင်အရုိုင်းပန်းခင်းလေးတွေခံစားငှက်လေးကြည့်။ ချင်းပြည်သွားဖုို့ ဆုိုအမြဲတက်ကြွခဲ့တာ။ ချင်းပြည်ကဆရာဆရာမတွေနဲ့ လည်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေဦးဆောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဓိကလုပ်ပေးဖုို့ လိုတယ်။ အခြေခံလမ်းကရှိပြီးသား။ အင်္ဂလိပ်ဖေါက်ခဲ့တော့ကွန်တုိုလိုင်းအတိုင်းဖေါက်ထားတာ။ ကတ္တရာကောင်းကောင်းအဆင့်မှီမှီလုပ်ပေးဖုို့ လိုတယ်။
မဒမ်ကြည်ကဘယ်ဖက်ကလည်း။ ချင်းမလေးတွေလှရင်ဘယ်သူမှမမှီဘူးနော့်။ သိပ်အကြည့်ခံတာ။ဒါကြောင့်ဆြာဟန်လည်းကြွေခဲ့တာပေါ့နော့်။
ချင်းဆိုတာနဲ့ ချင်းဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ကျက်သရေရှိလှတဲ့ သက်မွန်မြင့်ကို ပြေးမြင်လိုက်တာဘဲ ဆရာဟန်။ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတာ မကောင်းတာတော့ မသိဘူး။ သူ့ကြည့်နေရတာနဲ့တင် စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်။ ညစ်ညမ်းစိတ်နဲ့ ဖီလင်လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကြည်လင်သန့်ရှင်းတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ပါ။ သူ့မျက်နှာက အေးချမ်းမှုတွေကို လူတွေကို ကူးစက်အေးချမ်းစေသလိုလို ခံစားမိတယ်။
ချင်းပြည်နယ်တို့ နာဂတောင်တန်းတို့ဆိုတာ တစ်ရွာမှာ စကားဘာသာတစ်မျိုးဆိုသလို ဖြစ်နေကြတာ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကလဲ မကောင်း တစ်ရွာဝင်တစ်ရွာလည်ဓလေ့လဲ မရှိကြတော့ စကားလဲ မတူကြတော့ဘူး။
တိရစ္ဆာန်မှာ မြင်း၊ လူမှာ ချင်းတဲ့။ အလှတရားကို တင်စားပြောကြတာလေ။ ကြားဖူးတာ။
ချင်းအမျိုးသားနေ့မှစပြီး ချင်းပြည်နယ်ကြီးတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆရာဟန်တို့ ဇနီးမောင်နှံလဲ ရာသက်ပန် ချစ်ခင်နိုင်ကြပါစေကြောင်း။
လှပတဲ့ချင်းတောင်တန်းတွေဆီ နောက်တခါ သွားချင်သေးတယ်ဆရာရေ....
ကျောင်းမှာတုန်းက ခင်စန်းလျံဆိုတဲ့ ချင်းလေးကို မခင်စန်းဆိုပြီး နောက်ကြတယ်...ချင်းတွေက စည်းလုံးတယ်...လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းရင်တော့ ချင်းပြည်ကို ရောက်ဖူးချင်မိသား...
By the way..ဆရာမင်းလူရဲ့အဲဒီစာအုပ်နာမည် ပြောပါဦး...
i want to vist Chin state. it is so beautiful!!
Exactly, some Chin are so beautiful..... i believe most of our race are simple ,honest and lovely.
I am 50%Karen,
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် ဆရာ ဒေသဗဟုသတလေးရပါ့း)
အစ်မတို့ အမျိုးချစ်ပုံလေးက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်နူးစရာလေး ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောအုံးမှ အစ်မအကြောင်း ဆရာ ဘလော့မှာ တင်ရေးထားတယ်လို့ ဘာဟင်းဆိုလား ချက်ကျွေးရင် ကျနော့်လည်းဖိတ်အုံးလို့း)))
ဆြာဟန့်မဒီက ချင်းမှန်းလုံးဝမသိဘူး.. ကရင်ရုပ်လေးထွက်နေလို့လေ... :D
25 February 2014 at 05:37
ချင်းပြည်နယ်လေးက သိပ်ပြီးရောက်ဖူးချင်တဲ့ ပြည်နယ်လေးတစ်ခုထဲမှာပါတယ်။ မနှစ်တုန်းက သွားမယ်စီစဉ်ပြီးကာမှ မသွားဖြစ်လိုက်ဘူး။ ဒီတစ်နှစ်တော့ ရောက်အောင် သွားရမယ်။ အဲဒီအခါကျရင်တော့ ချာမူပတီးဆိုတာကို ပတ်ရှာပြီး စားခဲ့ရမယ်။ ဆရာနဲ့ မြတ်.. ဘယ်သူအရင်စားဖူးသွားမလဲနော်။ ;)
ဒီရက်ပိုင်း ဟားခါးခရီးထပ်သွားအုံးမယ်ဆြား)